Wiil dhigta fasalkayga ayaa igu yiri: “gabdhuhu waxay marwalba dhahaan maya marka ugu horeysa ee galmo la weydiiyo xitaa waloow ay rabbaan in ay galmo sameeyaan. Ayagu waxay doonayaan in la qanciyo.” Arintaasi run miyaa? – Tips for refugees
Previous Previous post: Masuuliyadaydii hore oo ah (22) jir iyo Aniga oo (wiil 16,) jir ah ayaa isjeceyl. Saaxiibadaydu waxay dhahaan: arintaan waa mid mamnuuc ah. Run miyaa arintaasi? Ayadu hadda waxay ka shaqaysaa hay’ad kale.
Next Next post: Ilmo adeertaydu waa 15 sanno jir oona guursatay. Wakhti dhow ayay waxay Jarmal la timid ninkeeda (25 sanno jir ah). Guurkaasi halkan laguma aqbalin. Sabab loo diiday?